‘अमीरों को होने वाली बिमारी’ | Dinesh Khabar
प्रत्यारोपणका लागि पहिलो आवश्यकता रगतको समूह मिलेको अंगदाताको हो ।
मेरो रगत ‘बी पोजेटिभ’ । सोही समूहको रगत भएका आफन्तहरूलाई भन्यौं । प्राय: सबैको सुझाव हुन्थ्यो, श्रीमानले दिए हुँदैन र ? श्रीमान ‘ए पोजेटिभ’ समूहका परे । एउटै समूह भएको भए सायद उनले दिइहाल्थे होला । नदिन पनि सक्थे, दिन्थे होला भन्ने मेरो विश्वासमात्र पनि हुन सक्छ । जे होस्, श्रीमानको ग्रुप नमिल्ने भएपछि हामीले नातागोतामा भन्न मिल्नेजति सबैलाई भनिहेर्‍यौं । आफ्नो अंग झिकेर मेरो जीवन बचाउन कसैलाई हिम्मत आएन वा मलाई महत्त्वपूर्ण मान्छे ठानेनन् । प्राय: सबैले भन्थे, ‘म त दिन्थेँ, तर... ।’ सबैले आ–आफ्नै बाध्यता सुनाउँथे । उनीहरूको आँखाबाट हेर्दा सायद यही सही थियो । मृगौला त कसैले दिएनन्, तर सुझावचाहिँ सबैले दिए । फलानोले त किनेर हाल्यो रे, तिमीहरूले किन नगरेको ? फलानो ठाउँमा पाउँछ रे । यति पैसाको जोहो पनि किन नगरेको ? प्राय: भेट्नेहरू सबैको यस्तै कुरा हुन्थ्यो । यता अंगदाता भेटिएका थिएनन् उता मृगौलाको अवस्था भने दिनदिनै नाजुक हुँदै थियो । हरेक महिना विशेष जाँच हुन्थ्यो । खर्चले मनमा गाँठो पार्थ्यो, रिपोर्टहरूले मृत्युले ढोका ढकढकाउन खोजेको चित्र कोर्थे । तैपनि पनि सारा कुरा दाउमा लगाएर जीवन बचाउन हाम्रो खोजी जारी थियो ।
२०७४ सालको कुरा । मेरो एकजना नाता पर्ने दाइ एकपटक मलाई भेट्न आए । ४०/४५ वर्षकै उमेरमा गृहस्थी जीवन त्यागेर संन्यासी बनेका थिए उनी । ती दाइले निकै भावुक हुँदै मेरो मृगौला मिल्छ भने दिन्छु भन्ने प्रस्ताव ल्याए । यो कुराले हामीलाई बालुवाको सहरमा पानी भेटिए जस्तै भयो । हामी दुबैले दाइलाई भेट्यौं । रगत जाँच गरियो । खुसीको कुरा दाइको पनि रगत समूह एकै रहेछ । संन्यासी दाइले बहिनीको जीवन बचाउन अंगदान गर्ने वाचा गरे । ‘मन्दिर निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न बाँकी छ, काम सकेपछि दिउँला है,’ उनले भने । २०७५ सालको बैसाखमा दाइलाई भेट्न हामी उनले बनाउँदै गरेको मन्दिरमा गयौं । मन्दिरको काम अन्तिम चरणमा थियो । ‘मेरा गुरुले किड्नी पनि ठिक गर्नसक्ने जडिबुटी चिनेका छन् । अहिले त्यो पनि खान सुरु गर्नु,’ उनले नयाँ प्रस्ताव ल्याए । मन्दिरको काम सकिनु अघि एकपटक त्यो जडिबुटी खाएर हेर्नु भन्ने उनको कुराले हामी दोधारमा पर्‍यौं । एकपटकजडिबुटी पनि खाने कुरा भारतको सफदरजंग अस्पतालको डाक्टरलाई सुनाउँदा त्यस्तो खाने भए यहाँ नआउनु भनेर हप्काएका थिए । किड्नी दिन्छु भनेको दाइको कुरा सिधै नकार्न पनि मलाई असजिलो भयो । ‘बैनीको नराम्रो सोचेको त छुइन, मेरो कुरामा अलि त विश्वास गर्नुपर्‍यो,’ दाइले जिद्दी गरे ।
हामीसँग पैसा नभएको थाहा पाएपछि उसले फोन गर्न छाड्यो ।यस्तै नयाँ मान्छे, नयाँ कुरा, नयाँ उपाय थाहा पाउने बित्तिकै श्रीमान मलाई सुनाउँछन् । मसँग प्रेम विवाह गरेका श्रीमानले खुसीको कुरा ल्याउँदा उही प्रेम प्रस्ताव ल्याएको झैं लाग्छ । अमेरिकाले मृगौलाको काम गर्ने चिप्स बनायो रे । डायलसिसमा पनि २३ वर्षसम्म बाँचेरे । अब ढुक्क होउ, प्रत्यारोपण हुने सम्भावना छ । यी कुराहरू उनले मेरो आत्मबल बढाउन अपनाएका उपायहरू हुन् भन्ने मलाई स्पष्ट थाहा छ । साथै यो पनि थाहा छ कि यी सबै कुरा सम्भव छैनन् । किनभने त्यसलाई पूरा गर्ने हामीसँग आर्थिक आधार छैन । फेरि पनि बाँच्ने रहर त हो, उनको कुरा पत्याउन मन लाग्छ । केही क्षणको सपना नै सही, पत्याउँछु, अनि मुख मिठ्याउँछु पनि ।
कहिलेकाहीं सोच्छु, धेरै पैसा, ठूलो पद अनि म पुरुष भइदिएको भए मेरो पनि अहिलेसम्म प्रत्यारोपण भइसक्थ्यो कि ? फेरि सोच्छु, दु:खी केलाई हुनु ? जति बाँचिन्छ, खुसी भएरै बाँच्छु । यतिबेला दिल्लीमा भेट भएका अटोरिक्सावाला दाइको कुरा सम्झिन्छु ‘बेहेन, ये तो अमिरों को होने वाली बिमारी है ।’ म प्रार्थना गर्छु, अमिर (धनी) लाई फनि यस्तो रोगले नछोओस् । यो लेख आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ।